Isingeniso | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Ngikhumbula kahle ngisakhula ngeminyaka yo-1960 sisebenzisa imali ehlobo ukudoba nomkhulu wami eningizimu ye-Indiana. UBabamkhulu wami owayengumvukuzi wamalahle waseKentucky futhi wagcina ethathe umhlalaphansi eChrysler Motor Corporation njengesisebenzi sefektri wabhekwa ngabaningi njengabanekhono lokukhanda. Wayenguye futhi nomdobi ongcono kunabo bonke engake ngahlangana nabo. Umkhulu wami wakuthokozela ukuthatha kwakhe umhlalaphansi ebopha izimpukane nokunakekela imishini yakhe yokudoba, kufaka phakathi injini yakhe yesikebhe ebusika nokudoba izinsuku eziningi ehlobo. Umkhulu wami walungisa izinjini ezincane egalaji lakhe elilodwa lezimoto ehlobo. Abantu beza bevela nxazonke bezolungisa imishini yabo yokugunda utshani. Ngicabanga ukuthi lokhu ukwenze kakhulu ngenxa yothando lokuthinta ngoba impela akazange abize imali eningi ngomsebenzi wakhe. Ngikhumbula ngimsiza ekuseni nasekuseni ntambama esebenza ngamashini otshani, esika utshani, enakekela ingadi, noma yini enye eyayidinga ukwenziwa ukuze akwazi ukukhululeka ukuyodoba ntambama. Lapho esethathe umhlalaphansi, umkhulu wami wathenga i-johnboat eyi-aluminium engamamitha angu-16 kanye nemoto entsha sha yakwa-Evinrude 3 hp Lightwin eyayikulungele ukuyisa emigodini yokuhlwitha bese idoba ngezimpukane emabhange. Izinkumbulo zami zokuqala zezikebhe nama-motors zivela kulezi zinsuku. Ngangihlale ngimangazwa ukuthi kulula kangakanani ukuqala kwamamoto akhe nokuthi agijima kahle kanjani. Wayephinde abe nomshini wokugunda utshani weLawn Boy owawuqala njalo lapho kudonswa okokuqala futhi wayengumgundi ongcono kunabo bonke engake ngawusebenzisa. Manje sengiyabona ukuthi imoto yakhe yesikebhe i-Evinrude kanye neLawn Boy mower motor zombili zenziwa yi-Outboard Marine Corporation efanayo futhi zombili zaziyizinjini ezimbili zomjikelezo ezinezingxenye eziningi ezishintshanayo.
Umkhulu wami wayeyindoda enekhono. Wayengeyena umuntu ocebile, kodwa wayezwana kahle namakhono akhe futhi wafeza izinto eziningi. Wakha izikebhe eziningana zokudoba ngokhuni. Wayengumbazi onekhono futhi wakha izindlu eziningana. Waze waklama futhi wenza inkamba ye-popup kudala ngaphambi kokuthi noma ngubani ezwe ngento enjalo. Ubophele izimpukane zakhe zikakhokho wasigcina sonke sihlinzekelwa ukudoba. Wayekwazisa kakhulu okusunguliwe okwenze impilo yakhe yaba ngcono. Wamangazwa ilambu lakhe laseColman kanye nesitofu asisebenzisela ukukhempa. Wayene-Silvertrol motor trolling motor eyayithule kakhulu ngokudoba emabhange. Isikebhe sakhe esisha se-aluminium sasilula ngokwanele ukuthi indoda eyodwa isingathe ukulayishwa nokwehliswa emarokheni phezu kwemoto yakhe yokudoba. Futhi wayeziqhenya nge-Ocean City # 90 automatic reel fly reel yakhe ngoba wayechitha isikhathi sakhe esiningi ephonsa induku yesandla ngesandla esisodwa futhi eqhuba isithuthi esinyathela ngesinye isandla. Wazizwa ukuthi uMnu Coleman wenza okupholile okuhle okugcina iziphuzo zethu zibanda ngosuku olushisayo lwasehlobo, kanti uMnu. Evinrude wenza i-3-hp yesikebhe semoto esikhulukazi i-Lightwin okwakulula ukusiphatha nokugibela esikebheni sakhe.
Manje njengoba sengineminyaka engama-50 ubudala, ngiyazazisa izinsuku ezinhle engakhula ngazo. Ngisachitha isikhathi ngenza isiko lokudoba izimpukane nobaba nezingane zami. Imishini esinayo namuhla yintsha, ithuthuke kakhulu, inkulu, futhi ngaphezu kwakho konke iyabiza. Ngibe nenhlanhla yokuthola nokwenza izinto umkhulu wami abengeke akwazi ukuzikhokhela, kepha ngandlela thile kukhona okushodayo. Ngithatha amadodakazi ami nendodana yami ngokudoba, futhi njenganoma yiziphi izingane ezinethuba, zonke ziyathanda ukushayela isikebhe. Ngandlela thile abatholi isipiliyoni esifanayo ngamandla amakhulu, ubuchwepheshe obuphakeme, izinjini ezine zestroke enginazo esikebheni sami sokudoba namuhla. Mina nendodana yami sasikwiBoy Scouts ndawonye, ​​futhi mina ngingumeluleki we-Environmental Science Merit Badge. Elinye lamachibi engifuna ukuwathatha ama-scouts linomkhawulo we-10-hp ngakho-ke ngazithola ngidinga imoto encane. Umngani wami obona engifuna ukukwenza nabasolwa wanginika ama-motors amancane athe mdala kakhulu ukuthi angadonsa intambo ukuze aqale. Lezi zimoto kwakuyi-Evinrude 1963 HP Lightwin ka-3 engayithanda ngokushesha ngoba kwakunjengokungathi ngikhumbula umkhulu wami enayo, kanye ne-1958 Johnson 5.5 HP Seahorse yango-1996. Ngangazi ukuthi lawa kwakuzimoto zakudala. Lawa ma-motors kanye ne-15 Johnson XNUMX hp engiyithathile engihleli kuyo, ngiyeke ukuthi kubiza kakhulu ukuthi ngiyilungise, kunginike inselelo ebengiyidinga ukwenza iphrojekthi enhle yokushuna ebusika.
UBabamkhulu wayehlale engitshela, futhi ngikukhumbula kahle, ukuthi "Uma kukhulunywa ngezimoto uma konke kuhlanganisiwe kwalungiswa kahle kuzobe kuhamba kahle." "Uma ingaqali noma igijime kahle, khona-ke kunenkinga okufanele niyithole niyilungise noma niyilungise." Leli elinye lamaqiniso amaningi empilweni angifundise lona. Inhlansi, uphethiloli, kanye nokucindezela yizinto ezintathu eziyinhloko ezidingekayo ukwenza ukugijima kwemoto.
Ithemba lami ukuthi ngibhale phansi ukuhlelwa kwalezi zimoto ngokuthumela izithombe nezincazelo kule webhusayithi ngendlela yokuthi kube ngumthombo kunoma ngubani onemoto efanayo edinga ukulungiswa noma ukusetshenzwa okuncane. Ngizobhala izingxenye ezithile nezinombolo zazo zekhathalogi engizisebenzisayo futhi ngikutshele ngqo okudingayo. Ngiyethemba ukwenza lemisebenzi yokulungisa ngamathuluzi alula kuphela nencwajana yokulungisa. Ungaba nenye yalezi zinjini ezindala ze-Evinrude noma zeJohnson ozungeze njengefa noma wazuza. Kungagijima noma kungasebenzi kodwa kungenzeka ukuthi kungenziwa ukuthi kusebenze kahle ngokushuna okuphelele. Ungathola noma iyiphi ingxenye oyidingayo yemoto endala nge-e-Bay noma kwi-inthanethi iyonke. Sinezixhumanisi lapho ungathenga khona izingxenye eziningi ku-Amazon.com. Ngokusebenzisa i-Amazon, sithola ikhomishini encane esiza ukuxhasa le sayithi namaphrojekthi wesikhathi esizayo. Uma une-outboard endala, udinga ukuyishuna ngaphambi kokuyibeka echibini bese ulindela ukuthi izokhele bese isebenza. Ngaphandle kokwenza kahle, ungalimaza ukuvakasha okuhle futhi uzithole uphoxekile. Kuthatha kuphela ama- $ 100 ezingxenyeni ezithile kanye nabasebenzi abathile abazinikele ukwenza isikebhe esincane sangaphandle esisebenza ngesikebhe futhi njengoba senza ngenkathi sisisha. Ngifunde ukuthi ezinye izingxenye ezikulezi zimoto zizodinga ukushintshwa, noma ngabe imoto ibigcinwe kahle kodwa isikhathi eside. Ezinye zezingxenye ezithathelwe indawo ziphakeme kakhulu kunezingxenye zangempela ngakho ukuzishintsha kuzosiza imoto yakho. Isifiso sami akukhona ukubuyisela la ma-motors ezingeni lokuthi ayizingcezu zombukiso, kepha kunalokho ngigcine ngokuthile engingakujabulela ukukusebenzisa iminyaka eminingi. Kunabantu abaseduze abalungisa ama-motors esikebhe amadala kuze kube seqophelweni lapho beyizicucu zombukiso bese bewanikela ukuthengisa.
Kungabiza imali eshisiwe ukulungisa lawa ma-motors esitolo sosizo lwabathengisa izikebhe. Ngitshelwe yizindawo ezimbalwa ukuthi ama-motors amadala awafanele ukulungiswa futhi bebenesifiso esikhulu sokungithengisela imoto entsha. Ezinye izindawo zizokutshela ukuthi azisebenzi kuma-motors aneminyaka engaphezu kwengu-10 noma engama-20 ubudala. Eqinisweni, lawa ma-motors kulula ukuwahlela futhi noma ngubani onesikhathi, ukubekezela, kanye nekhono elincane lokukhanda angalungisa futhi asebenze kahle ngezindleko ezincane. Uma usuqede eyodwa yale misebenzi futhi uyishisa okokuqala, uzoba nokwaneliseka okukhulu ngokwazi ukuthi wenze imoto yakho endala yesikebhe i-Evinrude noma uJohnson ihambe kahle.
Ngiyacela CHOFOZA LAPHA ukufunda ngalokho oludingayo ngaphambi kokuthi uqale iphrojekthi yakho.